Tag: xayeysiisyada twitter | Martech Zone
Tag: xayeysiisyada twitter
Talaado, Juun 1, 2021 Talaado, Juun 1, 2021 Douglas Karr
Xisaabaadyadu go'aan ma gaadhaan, dadku way sameeyaan. Barnaamijka Suuqgeynta Ku saleysan Xisaabta (ABM) ee guuleysata waxay la socotaa xisaabaadka heerka istiraatiijiyadeed laakiin waxay dadka kala hadashaa heerka fulinta. Influ2 ayaa tan ku qeexaysa inuu yahay barnaamij ABM-qaraar ah oo astaamaha muhiimka ah ay ka mid yihiin: Qodida kooxda wax iibsanaysa. Ka gudub xulashada xisaabaadka bartilmaameedka: cilmibaarista go'aan gaaryaasha gaara ee ka kooban iibsashada kooxaha kootooyinkaaga bartilmaameedka. Tixraac qeexitaanka shaqsiyeed ee ICP-gaaga si aad isugu duba rido liistada dadka go'aanka gaara
Jimco, Nofeembar 3, 2017 Jimco, Nofeembar 3, 2017 Douglas Karr
Twitter wuxuu tijaabinayaa barnaamijka xayeysiinta beta halkaas oo ay ku weynayaan tweets-kaaga. Waa $ 99 bishii waxaadna doorataa juqraafiga iyo sidoo kale qaybo bartilmaameed ah. Weli waxaan ahay taageere Twitter-ka waana xiiseynayaa bixintaan, marka markaan helay e-maylka iga codsanaya inaan ku biiro beta waa inaan dhahaa haa. Waxaan rabay inaan la wadaago fikradaha aan kala sooca lahayn si aan ugu soo noqdo qoraalkan oo aan arko waxa
Xayeysiinta Warbaahinta Bulshada iyo Ganacsiga Yaryar
Isniin, Janaayo 18, 2016 Isniin, Janaayo 1, 2018 Ball Lorraine
Facebook, LinkedIn iyo Twitter dhammaantood waxay xoojiyeen waxyaabaha ay ku xayaysiinayaan. Ganacsiyada yar yar miyey ku boodayaan warbaahinta bulshada xayeysiinta bandwagon? Taasi waxay ahayd mid ka mid ah mowduucyada aan ku sahaminnay sahaminta suuqgeynta internetka ee sannadkan.